QM oo ku baaqday dardar gelinta talaalka Covid-19. - Awdinle Online
QM oo ku baaqday dardar gelinta talaalka Covid-19.
April 16, 2020 (Awdinle Online) –Talaalka Covid-19 wuxuu noqon karaa waxa kaliya ee soo celin kara “wax caadi ah,” Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobay Antonio Guterres ayaa Arbacadii yiri, isagoo rajeynaya in uu sidaas sameeyo dhamaadka sanadka.
“Tallaal aamin ah oo wax ku ool ah waxa uu noqon karaa aaladda kaliya ee adduunka dib ugu soo celin karta dareen” caadi ah “, badbaadinaysa malaayiin nafood iyo bilyan aan tira lahayn,” ayuu raaciyay inta lagu gudajirey “videoconference” ee qaar ka mid ah konton dal oo Afrikaan ah oo xubno ka ah Qaramada Midoobay.
Wuxuu ku baaqay in la dardar-geliyo horumarinta iyo helitaankiisa dadka oo dhan, isaga oo intaas ku daray in ay waajib ku tahay “faa iido caalami ah” iyo “in ay noo oggolaato in aan xakameyno masiibada”.
“Waxaan u baahanahay dadaal hami ah si aan u hubinno in daneeyayaasha caalamiga ah ay ku shaqeeyaan is waafaqsan, isku dhaf iyo is wareysi si sare loogu qaado xawaaraha iyo cabirka lagama maarmaanka u ah fulinta tallaalka noocaan ah dhamaadka 2020 “, ayuu ku adkeystay Antonio Guterres.
Covid-19: Intee in le’eg ayaan u dhow nahay tallaalka oo yaa marka hore qaadan doona?
Guterres waxa uu sheegay in codsigiisa 25 maarso loo qoondeeyay $ 2 bilyan oo loogu deeqay wax ka qabashada dhameystiran ee bini’aadanimo ee Qaramada Midoobay ee la tacaalida masiibada ilaa iyo hadda waxa ay kor u qaadday 20 boqolkiiba lacagtaas.
Wax uu mahadceliyay hay’adda Qaramada Midoobay u qaabilsan caafimaadka ee WHO,waxa uuna sheegay in 47 dal oo Afrikaana ay ka caawiyeen qalabka lagu baaro Xanuunka Coronavirus.
Madaxa Qaramada Midoobay wuxuu kaloo amaaney dadaalka dhowr dowladood oo Afrikaan ah oo lagu yareynayo cawaaqibka masiibada.
Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobay Antonio Guterres ayaa amaanay Uganda, taas oo ganacsatada siisay waqti dheeri ah si ay ku xareeyaan canshuur celintooda; Naamibiya, taas oo siiya dakhli deg-deg ah shaqaalaha musiibada ku waayey shaqooyinkoodii; Cape Verde, oo bixiyay gargaar cunno; iyo Masar, taas oo canshuurta ka jartay Warshadaha si ay u kordhiyaan wax soo saarka.
AFP IYo Awdinle Online
Previous articleHowlgal ka socda Beledweyne iyo Dil ka dhacey
Next articleMacaadintii laga dhoofin jiray deegaanada Puntland oo amar Laga soo saaray